Midowga Musharixiinta oo qaadacay doorashadda socota | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Musharixiinta oo qaadacay doorashadda socota
Waxay ka digeen cawaaqibka ka dhalan doono doorashadda la boobayo, hadii aan la joojin, islamarkaana dib loo sixin qaladaadka jira.
MUQDISHO, Soomaaliya - Midowga Musharaxiinta ayaa daqiiqado ka hor soo saaray hadal saxaafadeed, ku aaddan doorashooyinka Gollaha Shacabka ee ka socda Gudaha Dalka.
Mucaaridka ayaa sheegay, in aanay aqbaleynin qaabka ay u socoto doorashadda boobka ku sifeysan ee gudaha dalka ka bilaabatay dhawaan.
Midowga ayaa qiray, in la baal-maray odayaashii dhaqanka ahaa ee soo dooranayey xildhibannada, isla markaana aysan jirin wax ergo ah oo tababar loo furay, taa baddelkeedana ergada laga dhigay shaqaalaha rayidka iyo ciidamo ka tirsan dowladda.
Dhaleeceynta ku xusnayd war murtiyeedka ay soo saareen oo ka koobnaa dhowr qoddob, ayaa waxaa ku jiray in ay luntay madaxbanaanidii iyo dhex dhexaadnimadii guddiyada doorashooyinka heer dowlad gobleed, isla markaana guddiyadu ay yihiin kuwa aan kala amar qaadaneynin.
Ra'iisul Wasaare Rooble ayey ku eedeeyeen inuu dhiira galiyey qaabka ay wax u socdaan, xilli ay dhawaan ka dalbadeen inuu hakiyo doorashadda, taasoo uu ku ballan furay sida ay sheegeen.
Midawga Musharaxiinta ayaa tilmaamay, in doorashaddan boobka ku socota ay dalka u horseedi karto qalalaase, iyo xasilooni darro, iyagoo xusay in masuuliyada wixii ka dhasha ay qaadayaan dowladda fedraalka iyo madaxda maamul goboleedyada.
Mucaaradka ayaa tibaaxay in waxa socda aan doorasho lagu magacaabi karin, waxana beesha caalamka ay ka dalbadeen in ay soo fara galiso arrimaha taagan, oo u muuqda kuwa caqabad ku ah mustaqbalka Soomaaliya iyo nidaamkii qori isku dhiibka ahaa ee soo jiray 20-kii sano ee ugu danbeysay.
Halkan ka akhri war-murtiyeedka:
0 Comments Topics: musharixiinta soomaaliya